Wasiirada arimaha Dibada ee Urur Goboleedka IGAD oo beri ku kulmaya Muqdisho |
Wasiirada arimaha Dibada ee Urur Goboleedka IGAD oo beri ku kulmaya Muqdisho
buy Silagra online, order lioresal.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaaciysay in dalalka xubnaha ka ah urur-goboleedka IGAD ay 10-ka bishan Janaayo oo ku beegan sabtida ay shir ku yeelan doonaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya, Daa’uud Aweys ayaa sheegay in shirkan uu noqonayo kii ugu horreeyay oo ka dhaca magaalada Muqdisho, amniga magaaladana si aad ah loo adkeeyay.
“Kulanka dalalka IGAD ay magaalada Muqdisho ku yeelanayaan waa kii ugu horreeyay oo ay Soomaaliya ku yeesheen tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Somalia 1991-kii,” ayuu yiri Daa’uud Aweys oo wareysi siiyey VOA.
Wuxuu sheegay in ajnadaha shirka uu ka mid yahay shirarka ay yeeshaan waddamada IGAD, intiisa badanna looga hadli doono arrimaha Soomaaliya.
“Waxyaabaha shirka looga hadlayo waxaa ka mid ah siyaasada, dib u heshiisiinta iyo amniga, maadaama qodobbadan ay yihiin kuwa horyaalla dowladda Soomaaliya ee ay doonayso in wax ka qabato,” ayuu sidoo kale yiri Daa’uud Aweys.
Sida uu sheegay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya, shirka IGAD ee ka dhacaya Muqdisho ayaa socon doona muddo hal maalin ah, isagoo xusay in dalalka IGAD ay horay u garteen in kulankaan lagu qabto Muqdisho.
Dhanka kale, Laamaha amniga ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howlgallada lagu adkeynayo amniga Muqdisho iyo jidadka la xiray.
Col. Qaasim Axmed Rooble oo ah Afhayeenka booliiska Soomaaliya, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xiritaanka wadooyinka qaar ay qeyb ka tahay howlaha lagu sugayo amniga, isagoo raalli-gelin siiyeey dadka Soomaaliyeed ee culeysku qabanayo inta waddooyinku xiran yihiin.